La -hawlgalayaasha Golaha Warshadaha Dhacdooyinka leh Xeerka Taageera Dhammaadka Ka -ganacsiga Carruurta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » La -hawlgalayaasha Golaha Warshadaha Dhacdooyinka leh Xeerka Taageera Dhammaadka Ka -ganacsiga Carruurta
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Maamulaha Golaha Warshadaha Dhacdooyinka Amy Calvert oo ku biirista Xeerka
Maanta, Luulyo 30, 2021, Maalinta Adduunka ee Ka Hortagga Tahriibinta Dadka 2021, Golaha Warshadaha Dhacdooyinka (EIC), oo ah cod caalami ah oo ka mid ah warshadaha dhacdooyinka meheradda ee u doodista, cilmi baarista, aqoonsi xirfadeed, iyo heerarka, ayaa ku dhawaaqay inay ku biirtay Xeerka, hindise dhinacyo badan taabanaya si looga hortago dhiig-miirashada carruurta.
EIC waxay noqotay saxiixayaasha Xeerka kaas oo siiya wacyigelin, qalab, iyo taageero warshadaha safarka iyo dalxiiska si looga ilaaliyo carruurta ka -faa'iidaysiga galmada.
Xeerku waa mid ikhtiyaari ah oo ka kooban lix shuruudood oo xubnuhu ay ku kacaan, si carruurta loo badbaadiyo.
Xeerka waxaa taageera ECPAT, oo ah shabakad caalami ah oo ururo ka shaqeeya sidii loo joojin lahaa ka -faa'iidaysiga galmada ee carruurta adduunka oo dhan.
Amy Calvert, oo ah Sarkaalka Fulinta, Golaha Warshadaha Dhacdooyinka, ayaa yiri: “EIC waxay taageertaa dhammaan dadaallada ka dhanka ah tahriibinta dadka, aad ayaana ugu hanweynahay inaan ku biirnay Xeerka si aan u taageerno hawlgalkeeda caalamiga ah. Sida laga soo xigtay Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO), in ka badan 40 milyan oo qof ayaa ku nool addoonsiga adduunka oo dhan; anagoo la shaqeyneyna Xeerka iyo ECPAT waxaan kaalinteena ka qaadan karnaa ugu dambeyn soo afjaridda ka ganacsiga dadka iyo dhiig -miirashada. Marka la eego baaxadda iyo baaxadda wershadeena waxaan leenahay awood aan ku noqonno horseed u ah isbeddel iyo horumar macno leh oo waara. ”
Xeerku waa kan ugu horreeya oo keliya oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ah mabaadi'da ganacsiga ee shirkaduhu fulin karaan si looga hortago dhiig -miirashada galmada iyo ka -ganacsiga carruurta. Xeerku wuxuu taageeri doonaa EIC, oo ah federaal caalami ah oo taageera warshadaha dhacdooyinka meheradda, iyadoo lala kaashanayo oo lala kaashanayo daneeyayaasha ka hortagga ka -faa'iidaysiga galmada ee carruurta; dejinta siyaasadaha iyo habraacyada; shaqaalaha tareenka; ku dar qodob ku jira heshiisyada; iyo inay siiyaan dadka safarka ah macluumaad ku saabsan sida looga hortago loona soo sheego kiisaska la tuhmo.